အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး (Aspirin) ရဲ့ တမူထူးခြားအသုံးဝင်ပုံများ – Trend.com.mm
Posted on October 12, 2018 by Noel
ခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ခဲနာကျင်မှုသက်သာစေနိုင်တဲ့ Aspirin ဆေးတွေဟာ တစ်ခြားနေရာတွေမှာလည်းအသုံးဝင်နေသေးတယ်ဆိုတာသိရဲ့လား? Aspirin က ဈေးလည်းသက်သာသလို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးနိုင်သေးလဲဆိုရင်…
ချွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စွန်းထင်းကွက်တွေကို Aspirin ဆေးက ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။Aspirin ဆေးသုံးတောင့်ကိုချေပြီး ရေခွက်တစ်ဝက်လောက်နဲ့ပျစ်ပျစ်လေးဖျော်လိုက်ပါ။ပြီးရင် အစွန်းအထင်းကွက်နေရာတွေမှာသုတ်လိုက်ပါ။၂နာရီလောက်ထားပြီး ပုံမှန်လျှော်ဖွပ်နေကျအတိုင်းလျှော်ဖွပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အသစ်အတိုင်းပြန်လည်သန့်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
သံချေးတက်ပြီဆို ဘယ်လိုချွတ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။မပူပါနဲ့တော့။သံချေးတက်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုယူ၊ပြီးရင် ချေထားတဲ့ Aspirin ဆေးမှုန့်တွေကိုဖြူးလိုက်၊၁၀မိနစ်လောက်ထားပြီးရင် ရေနဲ့သေချာဆေးကြောလိုက်ပါ။
ဗောက်ပျောက်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေဟာလည်း ဒီနေရာမှာမကယ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင် Aspirin ဆေးကိုသတိရလိုက်ပါ။Aspirin ဆေး၂တောင့်ကို အမှုန့်ချေပြီး ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ရောစပ်ပါ။ပြီးရင် ပုံမှန်ခေါင်းလျှော်သလိုပဲလျှော်ပါ။တစ်ပတ်ကို ၂ခါပုံမှန်လျှော်ပေးမယ်ဆိုရင် မကြာခင်ဗောက်ထတာပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အပင်လေးတွေစိုက်ထားတာ ကြီးထွားနှုန်းနှေးနေတယ်၊ကောင်းကောင်းမသီးမပွင့်ဘူးဆိုရင် Aspirin လေးသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။သစ်ပင် ပင်စည်တွေမှာတွေ့ရတဲ့salicylic acid ၊ acetylasalicyclic acid ဆိုတာတွေက Aspirin ဆေးတွေမှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆေးမှုန့်ကိုအပင်မှာဖြူးပေးမယ်ဆိုရင်အပင်လေးတွေရဲ့ပြောင်းလဲကြီးထွားမှုကို မကြာခင်မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဘယ်သူမဆိုကိုယ့်ခြေဖ၀ါးကြမ်းနေတာမလိုချင်ကြပါဘူး။ဒီတော့ခြေဖ၀ါးလေးနူးညံ့ချောမွတ်နေအောင် ချေးချွတ်ပေါင်းတင်ပေးဖို့လိုလာပါပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Aspirin ငါးတောင့်ကို အမှုန့်ကြိတ်၊ပြီးရင် သံပရာရည်စားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ရေစားပွဲတင်ဇွန်းတစ်ဝက်နဲ့ရော၊ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခြေဖ၀ါးမှာလိမ်းလိုက်ပါ။ခြေအိတ်လေးစွပ်ပေးထားပြီး ၁၀မိနစ်ခဏထားပါ။ခဏနေရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ဆေးကြောလိုက်ပါ။နှစ်ပတ်ကို ၁ခါ၊သုံးပတ် တစ်ခါလောက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ကြမ်းတမ်းတဲ့ခြေဖ၀ါးတစ်စုံက နူးညံ့ချောမွေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ဘုရားပန်းအိုးထိုးတဲ့အခါ ပန်းလေးတွေကအရမ်းလှနေရင် ကြာရှည်လန်းဆန်းစေချင်ကြတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆို ပန်းအိုးထဲကို Aspirin ဆေးမှုန့်နည်းနည်းဖြူးထားလိုက်ပါ။Aspirin မှာပါတဲ့ salicylic acid ကြောင့် ရေကိုလည်းသန့်ရှင်းစေပြီးဘတ်တီးရီးယားတွေကင်းစင်ကာ ပန်းတွေကြာကြာခံနေပါလိမ့်မယ်။
Aspirin မှာပါတဲ့ ရောင်ရမ်းနာကျင်မှုလျှော့ချပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ကြီးမားတဲ့ခြင်ကိုက်ဖုတွေ၊ဒဏ်ရာတွေရလာတဲ့အခါ Aspirin ဆေး ၂တောင့်လောက်ကို အမှုန့်ခြေ၊ရေအနည်းငယ်နဲ့ရောစပ်ပြီး အဲ့ဒီဒဏ်ရာနားမှာလိမ်းပေးထားပါ။သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
ခန်ဓာကိုယျကိုကျခဲနာကငျြမှုသကျသာစနေိုငျတဲ့ Aspirin ဆေးတှဟော တဈခွားနရောတှမှောလညျးအသုံးဝငျနသေေးတယျဆိုတာသိရဲ့လား? Aspirin က စြေးလညျးသကျသာသလို ဘယျလိုနရောတှမှောသုံးနိုငျသေးလဲဆိုရငျ…
ခြှေးကွောငျ့ဖွဈတဲ့စှနျးထငျးကှကျတှကေို Aspirin ဆေးက ဖယျရှားပေးနိုငျပါတယျ။Aspirin ဆေးသုံးတောငျ့ကိုခပြွေီး ရခှေကျတဈဝကျလောကျနဲ့ပဈြပဈြလေးဖြျောလိုကျပါ။ပွီးရငျ အစှနျးအထငျးကှကျနရောတှမှောသုတျလိုကျပါ။၂နာရီလောကျထားပွီး ပုံမှနျလြှျောဖှပျနကေအြတိုငျးလြှျောဖှပျပေးမယျဆိုရငျ အသဈအတိုငျးပွနျလညျသနျ့ရှငျးသှားပါလိမျ့မယျ။
သံခြေးတကျပွီဆို ဘယျလိုခြှတျရမှနျးမသိဖွဈနတေယျမဟုတျလား။မပူပါနဲ့တော့။သံခြေးတကျနတေဲ့ပစ်စညျးကိုယူ၊ပွီးရငျ ခထြေားတဲ့ Aspirin ဆေးမှုနျ့တှကေိုဖွူးလိုကျ၊၁ဝမိနဈလောကျထားပွီးရငျ ရနေဲ့သခြောဆေးကွောလိုကျပါ။
ဗောကျပြောကျတယျဆိုတဲ့ခေါငျးလြှျောရညျတှဟောလညျး ဒီနရောမှာမကယျနိုငျတော့ဘူးဆိုရငျ Aspirin ဆေးကိုသတိရလိုကျပါ။Aspirin ဆေး၂တောငျ့ကို အမှုနျ့ခပြွေီး ခေါငျးလြှျောရညျနဲ့ရောစပျပါ။ပွီးရငျ ပုံမှနျခေါငျးလြှျောသလိုပဲလြှျောပါ။တဈပတျကို ၂ခါပုံမှနျလြှျောပေးမယျဆိုရငျ မကွာခငျဗောကျထတာပြောကျကငျးသှားပါလိမျ့မယျ။
အပငျလေးတှစေိုကျထားတာ ကွီးထှားနှုနျးနှေးနတေယျ၊ကောငျးကောငျးမသီးမပှငျ့ဘူးဆိုရငျ Aspirin လေးသုံးပေးနိုငျပါတယျ။သဈပငျ ပငျစညျတှမှောတှရေ့တဲ့salicylic acid ၊ acetylasalicyclic acid ဆိုတာတှကေ Aspirin ဆေးတှမှောပါဝငျနပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ဒီဆေးမှုနျ့ကိုအပငျမှာဖွူးပေးမယျဆိုရငျအပငျလေးတှရေဲ့ပွောငျးလဲကွီးထှားမှုကို မကွာခငျမွငျတှရေ့မှာပါ။
ဘယျသူမဆိုကိုယျ့ခွဖေဝါးကွမျးနတောမလိုခငျြကွပါဘူး။ဒီတော့ခွဖေဝါးလေးနူးညံ့ခြောမှတျနအေောငျ ခြေးခြှတျပေါငျးတငျပေးဖို့လိုလာပါပွီ။ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ Aspirin ငါးတောငျ့ကို အမှုနျ့ကွိတျ၊ပွီးရငျ သံပရာရညျစားပှဲတငျဇှနျးတဈဝကျ၊ရစေားပှဲတငျဇှနျးတဈဝကျနဲ့ရော၊ခပျပဈြပဈြလေးဖွဈလာပွီဆိုရငျခွဖေဝါးမှာလိမျးလိုကျပါ။ခွအေိတျလေးစှပျပေးထားပွီး ၁ဝမိနဈခဏထားပါ။ခဏနရေငျ ရနှေေးနှေးလေးနဲ့ဆေးကွောလိုကျပါ။နှဈပတျကို ၁ခါ၊သုံးပတျ တဈခါလောကျလုပျပေးမယျဆိုရငျ ကွမျးတမျးတဲ့ခွဖေဝါးတဈစုံက နူးညံ့ခြောမှလေ့ာပါလိမျ့မယျ။
ဘုရားပနျးအိုးထိုးတဲ့အခါ ပနျးလေးတှကေအရမျးလှနရေငျ ကွာရှညျလနျးဆနျးစခေငျြကွတယျမဟုတျလား။အဲ့ဒါဆို ပနျးအိုးထဲကို Aspirin ဆေးမှုနျ့နညျးနညျးဖွူးထားလိုကျပါ။Aspirin မှာပါတဲ့ salicylic acid ကွောငျ့ ရကေိုလညျးသနျ့ရှငျးစပွေီးဘတျတီးရီးယားတှကေငျးစငျကာ ပနျးတှကွောကွာခံနပေါလိမျ့မယျ။
Aspirin မှာပါတဲ့ ရောငျရမျးနာကငျြမှုလြှော့ခပြေးနိုငျတဲ့အစှမျးသတ်တိကွောငျ့ ကွီးမားတဲ့ခွငျကိုကျဖုတှေ၊ဒဏျရာတှရေလာတဲ့အခါ Aspirin ဆေး ၂တောငျ့လောကျကို အမှုနျ့ခွေ၊ရအေနညျးငယျနဲ့ရောစပျပွီး အဲ့ဒီဒဏျရာနားမှာလိမျးပေးထားပါ။သကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။